एकदेव आलेको स्मृति दिवस सम्पन्न – Khabar batika
माघ १२ गते २०७३
क्रान्तिकारी किसान नेता एवं बाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा एकदेव आलेको ४७औ स्मृति दिवस बुधबार मनाइएको छ । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हरिबहादुर चुमानले लामो समयदेखि एकदेव आले स्मृति तथा चिन्तन प्रतिष्ठानको जग्गा प्राप्तिको लडाई बल्ल पूरा भएको बताए । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठले संस्कृति मन्त्रालय मार्फत ४५ लाख रुपैयाँ प्रतिष्ठानको नाममा ल्याउन सफल भएको बताए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्रीराम कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री भिम प्रसाद गौतम, स्मारक निर्माण संयोजक शेषमणी अचार्य, एकदेव आलेको जीवनी लेखक दधिराज सुवेदी, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति बैकुण्ठ न्यौपाने, नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष केदार सिग्देल, राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला अध्यक्ष पुष्ष्पलाल श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
एमालेले तोक्यो स्थानीय निकायमा संयोजक
दमौली- नेकपा एमाले तनहुँले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा संयोजक तोकेको छ । एमाले तनहुँको मंगलबार सम्पन्न बैठकले जिल्लाका १० वटै स्थानीय निकायमा संयोजक तोकेको हो । Post Views: 275 Read More
Samundra Poudel 10 months ago
— सूर्यचन्द्र बस्नेत किताब, कपडा, खेलौना, फर्निचर, विद्युतीयलगायत घर कार्यालयमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका सामग्रीको व्यवस्थापन तपाइँ कसरी गर्नुहुन्छ ? फोहोर सरह फयाक्ने वा पुनः प्रयोग गर्ने ? तपाइँको... Read More
मनाङ २ फिट बाक्लो हिमपात ।
मनाङ-मनाङ जिल्लामा केहि दिन अगाडी बाट अत्याधिक जाडो बडेको छ । हिजो रातभरको हिमपातसंगै आज पिसाङ गा.बि.स. भन्दा माथीको गाउँहरुमा २ फिट भन्दा बाक्लो हिउँ परेको छ । Post... Read More
Valentine Vibes 2
Bhola Thapa Chhetri2years ago
Model : Laxman Thapa Magar/Surakxya Shrestha Wardrobe : Gyanu Fashion Collection(Female)/ Bareli Tailors (Male) Props : Rehana Gifts Galery (Near Kumari Bank) Lens : Samundra Poudel Copyright : Khabarbatika/Elegant... Read More